Indlu yeglasi kunye ne-SPA-i-DCA eqinisekisiweyo -
Indlu ekhiwe emthini sinombuki zindwendwe onguDream&Charme
Indlu yeglasi omi phezu kwentaba ezintle intliziyo Monferrato (UNESCO lemveli), iNdlu Glass inikeza amazing 360 lwembono, lokulala ngokupheleleyo ubutofotofo, kukho igumbi lokuhlala ngobuchule, ikhitshi yaxhobisa ngokupheleleyo, indlu yangasese nezemarmore Tuscan, Sauna kunye Hammam.
Ixhotyiswe ngeteknoloji ye-automation yasekhaya, indawo yomlilo, iTV. njl.
Kufuphi: iindawo zokutyela ezigqwesileyo, ibala legalufa elinemingxuma engama-36, amahashe kunye neendawo ezigqwesileyo zewayini.
Ukuhlala kwi-Glass House 7 * ngamava awodwa ngokwenene!
Ekuphela kweNdlu yeglasi e-Itali. Intuthuzelo enkulu, ukhuseleko kunye nemfihlo, ejikelezwe yindalo. Ngokwenene ngamava awodwa e-Itali. Ilungele isibini ngosuku lokuzalwa, isikhumbuzo, umzuzu okhethekileyo, i-honeymoon okanye ubusuku bomtshato, njl.
Enkosi kwipanorama yayo yomlingo, i-Glass House ifanelekile ngeempelaveki zothando, kubusuku bokuqala bomtshato, ukubhiyozela isikhumbuzo, ngembasa yenkampani, njengesipho somhla wokuzalwa okhethekileyo, okanye ukuhlala nje amava angenakulibaleka. Indlu yeglasi iqinisekisiwe nge-DCA kwaye ifumene ibhaso njengeyona Spa ye-Bio ebalaseleyo e-Itali ngo-2021.
Umbuki zindwendwe ngu- Dream&Charme
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Casale Monferrato